ụlọ ahịa ịzụ ahịa ụlọ ahịa na-etinye na nkuzi oge ụfọdụ
Ụlọ ahịa & Ahịa
Anyị anaghị ere ikuku
Onye na-ere ahịa na onye na-ere ere
Ị na-amụta na mmemme ahụ ire ere emeso ndị ahịa. Ị na-eme ezi nkwurịta okwu (okwu ọnụ ma ọ bụ okwu ọnụ); Ndị a gụnyere okwu ahịa (AVRUVOCO), usoro njikwa agha, usoro nyocha nsogbu, mmekorita, mkparịta ụka na nkwenye.
Ị na-amụta ngosi nkà na ahịa usoro. Ị na-amụta ime ihe ndekọ ego na ịnọgide na-enwe ụlọ ahịa. Nweta azụmahịa nghọta na ngwaahịa ihe ọmụma.
N'ime usoro mmụta izugbe ị ga-enweta otu isiokwu dị ka ihe a na-akụzi na agụmakwụkwọ ọrụ oge niile site na afọ 3e ruo na gụnyere 7e afọ. Also na-enwetakwa ọzụzụ Bekee.
Tụkwasị na nke a, ị nwere ike itinye aka na ọrụ ndị dị ka obere-azụmahịa, ụlọ ọrụ mmemme na ndị ọzọ!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ọrụ nke gị, ịchọrọ akwụkwọ akwụkwọ azụmahịa.
Anyị na-enye ohere iji nweta akwụkwọ a n'oge agụmakwụkwọ gị. Ọmụmụ ihe a dị otu afọ, a na-enyekwa ya dịka ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ.
Gị na ndị ọzọ try na-anwa ime ka ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ gị baa uru ma ị mụta aghụghọ niile nke ịzụ na ire. Wayzọ a ị ga-esi mara nke ọma na njedebe nke usoro ahụ ma ọ bụrụ na ịzụ ahịa azụmaahịa bụ ihe maka gị ma nwee ngwongwo siri ike iji rụọ ọrụ dị ka onye na-arụ ọrụ onwe gị.
Ọzụzụ ndị ọzọ na ahịa
Na mgbakwunye na ọzụzụ ahịa Anyị na-enye ọzụzụ onye na-ere teknụzụ na. Ọzụzụ a na-elekwasị anya na ahịa B-na-B. Ị ga-eru eru maka azụmahịa N'onwe Gị na Teknụzụ Ọrụ Mmemme; ụlọ nkwakọba ihe, na onye nkesa nke ngwa ngwa ụlọ ....
Ị bụ onye ahịa-enyi na enyi
Ị bụ oge na n'usoro
Ewuberela gị ahịa
Afọ ole ka ị ga-abụ?
Ị nwere ike ịgbaso usoro ahụ site na 15 afọ gị 25 afọ.
Ọ bụrụ na ị bụ 15, ị ghaghị ịgbaso ma ọ dịkarịa ala afọ 2 mbụ nke ọzụzụ oge niile.
Ọ bụrụ na ị bụ okenye karịa 18, ị ghaghị iru eru maka ọrụ akwụ ụgwọ. Ị ghaghị ịnọ n'anụ ahụ ma ị ga-enwerịrị ikikere ịrụ ọrụ na Belgium.
Ị nwere ajụjụ ọ bụla?
Kpọtụrụ anyị site na weebụsaịtị a ma ọ bụ site na ekwentị.
Ogologo oge ole ka ọzụzụ ahụ ga - ewe?
ọzụzụ ire ere (igbe ahịa) na-adịru afọ abụọ ma ọ bụ atọ. Ị nwere ike ime dị iche asambodo Were onye nkwado, onye inyeaka ego-azụmaahịa na onye na-azụ ahịa.
Kedu ihe ọmụma tupu ị ga - enweta?
Amaghị ihe ọ bụla dị mkpa. Ọ dị mkpa, Otú ọ dị, na ị nwere ike ikwu na Dutch zuru oke ahịa dịka ị ga-enwe ike ịkwanyere ndị ahịa mgbe niile.
Ọ bụrụ na ịnwe obi abụọ ma ọzụzụ a bụ ihe maka gị, egbula oge ịkpọtụrụ anyị.
Ị nwere ike ile anya mgbe niile!
Kedu ọrụ gị yiri?
als onye na-ere ahịa Ị na-arụ ọrụ na mpaghara dị iche iche na ụlọ ahịa; dịka ọmụmaatụ, dị ka onye nnọchianya, onye na-ere ahịa na teknụzụ ma ọ bụ onye na-akwụ ụgwọ ọrụ. Ị nwere ike ịga rụọ ọrụ na nnukwu ụlọ ahịa, na ụlọ ahịa ákwà ...
Site na nkwekọrịta ziri ezi, mkpali na ịzụ ahịa ahịa, enwere ohere maka ịba ụba n'ọrụ gị.
Kedu ọrụ ị ga-enwe?
Kedu ihe osi nri kwesịrị?
Ị nwere ike ịnọgide na-amụ ihe?
Mgbe ọzụzụ ere ahịa-ere, ị nwere ike ịmalite ịmalite ọmụmụ ihe ọzọ na mpaghara ọzọ (eg HBO5), azụmahịa ụwa, ahịa ...
Ọ bụrụ na ị nweta ogo mmụta na-arụ ọrụ, ị ga-enweta diplọma nke mmụta sekọndrị. Anyị na-agbaso usoro ọmụmụ nke BSO - Secondary Secondary Education.
Nwere ike ịga n’ihu ịmụ akwụkwọ na diplọma gị. Buru n’uche na ịmụba akwụkwọ abụghị ihe mgbaru ọsọ mbụ nke ọzụzụ ọrụ aka. Ebumnuche nke ọzụzụ ọrụ bụ iji kwadebe gị maka ọrụ ọrụ. Yabụ na anyị na-elebara ntị nke ọma banyere ikike ịchọrọ iji nwee ike ịrụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịnọgide na-amụ ihe, biko tụlee ya na ndị nkụzi PAV gị. Ha nwere ike inye gị ndụmọdụ ma ọ bụrụ na nke a bụ uche. Ha nwekwara ike ịchọpụta ma ị nwere ohere ịga nke ọma. Ma n'elu ihe niile ... ha nwere ike inye gị ndụmọdụ ma duzie gị n'ime atụmatụ gị iji nọgide na-amụ ihe.
Ịmụta + Na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru ezu
Ịmụta na ịrụ ọrụ na-amakwa gị n'okpuru aha ahụ akụkụ oge ọzụzụ.
Ị mụtara a ọrụ ma ọ bụ ọrụ site na ijikọta ọrụ na mmụta.
Dịka ọmụmaatụ, ị na-aga ụlọ akwụkwọ ụbọchị abụọ n'izu ma rụọ ọrụ ụbọchị atọ.
Ị ga-enweta otu akụkọ ugboro anọ kwa afọ na nsonaazụ gị ma ụlọ akwụkwọ gị ma arụ ọrụ.
Na ọzụzụ ọrụ ị ga-amụta ọrụ ma nwee ike inweta akwụkwọ ọkachamara.
Na mgbakwunye, ị na-eso otu ụbọchị n'izu isi okwu dị ka usoro agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. N’ime usoro mmụta izugbe ị nwere ike iwere ogo nke abụọ, nke atọ ma ọ bụ ọbụna diploma diploma gị.
Ịmụ ihe na ịrụ ọrụ bụ usoro pụrụ iche.
Anyị na-arụ ọrụ na-enweghị isi. A ga-ekpe gị ikpe maka ihe ị nwere ike.
Nsonaazụ gị na isi okwu (PAV) anaghị emetụta nsonaazụ gị na isiokwu ndị bara uru.
Anyị na-arụ ọrụ dị iche iche ka i wee gụchaa n'afọ. Ozugbo ị ruru eruzu niile na PAV, a ga-enye gị ogo ma ọ bụ diploma.
Ya mere ị pụghị "ịnọdụ ala" ma na-amụ ihe na gị onwe gị.
Ọ ga-amasị gị karịa ozi? Kpọtụrụ anyị site n'ụdị ma ọ bụ site na ekwentị.
Kedu ihe ụgwọ ọzụzụ ahụ?
Anyị na-agbasi mbọ ike ka usoro ọmụmụ anyị bụrụ ọnụ ala.
Ị na-akwụ ụgwọ ego ụlọ akwụkwọ ọ bụla kwa afọ. (Nke a ga-ebelata ma ọ bụrụ na ị denyere aha mgbe 1 March).
Na mgbakwunye, ị na-akwụ ụgwọ maka ihe ị na-eji, maka uwe ọrụ gị na tupu ị pụọ.
Ụgwọ kwa nkuzi dị iche iche.
Ọnụ ego ọzụzụ ọnụ ala kachasị ọnụ ahịa 185 kwa afọ; ọnụahịa 350 kachasị ọnụ.
Kedu ka ị ga-esi akwụ ụgwọ?
Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ego na nchịkwa ahụ; ị nwere ike ịnyefe ego na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na kaadị akụ.
Ị gaghị akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ na otu ịga. Ugboro anọ n'afọ, ị na-enweta akaụntụ ụlọ akwụkwọ.
Kedu ihe ị ga-akwụ mgbe ị debanyere aha?
Mgbe ị debanyere aha, anyị na-akwado njedebe nke 50 euro.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụ ụgwọ na otu aga, ịnwere ike ịkwụ ụgwọ ya na nkeji.
Kpọtụrụ anyị site na weebụsaịtị ma ọ bụ site na ekwentị. I nwekwara ike ima elu mgbe niile n’oge awa akwụkwọ.